सपथ (लघुकथा) - Lekhapadhi लघुकथा : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी ५ असार २०७८, शनिबार ११:१२ मा प्रकाशित
चन्द्र-सूर्य रोइरहेका थिए शिर निहुराएर । आमाको अवस्था झन् झन् नाजुक बन्दै गइरहेको थियो ।
अनुहारको लालिमा अँध्यारोको पहुँच बढदै थियो । खुशीका रेखाहरू विलीन हुँदै देखिन्थे । आमाको विसञ्चोको खबर सायद पायो कि छोरोले । ढिलो गरि आयो आमालाई भेट्न ।
आमाको नाजुक अवस्थाको ख्यालै नगरी एकछिन है आमा ! भन्दै फुत्त निस्कियो त्यहाँबाट ।
एकछिन भलाकुसारी के गर्दै थियो मोबाइलमा टिरिङ टिरिङ घण्टी बजीहाल्यो । आमाको नाजुक अवस्थाको ख्यालै नगरी एकछिन है आमा ! भन्दै फुत्त निस्कियो त्यहाँबाट । पर-पर ढल्किने बेलासम्म हेरिरहिन् आमाले एक टकले तर उसले फर्केर हेरेन । उसलाई आमाको मतलव थिएन, थियो त केबल पदको मात्रै ।
आडम्बरको पयरले आमाको छाती कुल्चिए भन्ने पनि आभास थिएन ।
ऊ स्वार्थको आहालमा चुर्लुम्मै डुबिसकेको थियो । नैतिकताको खोल च्यातिसकेको थियो । आडम्बरको पयरले आमाको छाती कुल्चिए भन्ने पनि आभास थिएन । उसले यत्ति पनि बुझेन की आमा नरहे यो पद-प्रतिष्ठाले के गर्ने भनि ।
आमा मृत्युशैय्यामा जीवन र मरणको दोसाँधमा बचाउन आऊ छोरा भन्दै छट्पटाइरहिन… गुहारिरहिन् । पर टाढा बन्द कोठामा हँसिलो मुद्रामा खुशीले भरिएर छोरा सपथ ग्रहण गर्दै थियो “म ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि देश र जनताको रक्षार्थ….!!
बेदकोट नगरपालिका, कंचनपुर
(चन्द, बिगत लामो समयदेखि साहित्य क्षेत्रमा रही गित, गजल, लघुकथा लेख्दै आउनुभएको छ । निरन्तर रुपमा साहित्यिक रचना हामीलाई पठाउनु हुने अङ्कुर चन्दमा हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दछौ – www.lekhapadhi.com)
यहाँहरुका लेख-रचनाहरु हामीलाई पठाउनुहोस :
मृत्युपछि के ? (लघुकथा)